Kareemada La Isku Qurxiyo, Adigoo Gurigaaga Joogo Ayaad Isqurxin Kartaa. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: May 5, 2017, 3:08 pm
Xaqiiqdu waxay tahay in wax cream ama daawo bilaa chimecals aysan jirin. Markay ugu yartahay waxaa lagu daraa walxaha ka iLlaaliya innuu shaygu uusan qudhmin, gaari karo ama oolli karo mudo badan iyo waliba midabada.
Waa markay ugu yartahay chemicals yada lagu daro cosmatics ka maanta. Kuwaas waxaa inoo dheer chemicals khatar ah oo lagu isticmaalo, saabunaha, shampoo yada, make up iyo cosmetic yada oo dhan oo keeni kara xanuuno xun-xun sidda cancer iwm. Haddaba waxaad u baahan tahay inaad si dabeeci ah u noolaatid oo aad akhiradaada iyo caafimaadkaagaba ka talisid adigoo waliba dhalaalaya.
Haddaba si aanu iskugu qurxino wax yaabaha dabiiciga ah waxaa lagama maarmaan ah inaad markeeda hore aad tahay qof cuna cunto isku dheeli tiran oo ubadan khudaarta, caanaha, kaluunka iyo digiraha iwm. Inaad tahay qof seexda hurdo kugu filan oo habeenkii ah iyo waliba caba biyo kugu filan maalin walba. Intaa wixii dheer waxaan muhiim ah inaad taqaanid waxa aad xasaasiyada aad ku leedahay. Waayo wax yaabaha aanu halkan ku sharixi doono way dhici kartaa inaad xasaasiyad ku yeelatid.
Ogowna waxaa dhici karta wax aad xasaasiyad ku leedahay xagga cunitaanka innuu maqaarka waxba u dhimin, ama wax aanad xasaasiyad aanad ku lahayn waxaa dhici karta inuu maqaarka wax u dhimo oo aad ka xajiimootid. Haddaba inta aanad korkaaga aanad marin wax ogow dhikaagu nooca uu yahay iyo waliba wax uu dhibsanayo.
Waxaad iska soo qaadi kartaa dhiig aad ku ogaanaysid xasaasiyada jidhka ama ku tijaabi meel jidhkaaga ka mid ah oo bal eeg inaad shaga aad tijaabinaysid xasaasiyad ku leedahay. Intaanad wajiga waxba marin fadlan farahaaga sifiican u maydh, wajigana biyo diiran oo cad ku maydh. Waxaad u samaysaa wajigaaga tuwaal yar oo naacim ah oo u gaar ah oo markasta nadiif ah. Ogowna inaad wax walba wajigaaga ku tijaabisid waxaa ka fiican inaad baratid wajigaagu nooca uu yahay si aad uulla macaamishid waxa munaasabaya.
Kuli waxyaabahan hoos ku dhigan oo dhammi waa wax aad tukaanka cuntada ama jikadaada ka heli kartid oo wali ku siinaya nafaqooyin, nadaafad iyo bilic. Waxayna kugu caawinayan in uu caafimaadkaagu hagaago haddii uu Allah(swc) kuu qadaro. Markasta isku dar inaad samaysatid in kugu filan markaas uun oo waxba ka dhigin. Waxa freshka ah baa ka fiican waxa la dhigo, maadama aanu isla illaalinayso inay bakeeriya ku dhalaan.
Beed/ukun inteeda cad
F.G: Qiyaasta adigu qiyaaso in wajigaaga ama jidhkaaga ku filan. Isku wadda dar kuligood, boorashka yara tun ridiq ama radi. Kadibna wajiga ood biyo cad ku maydhay mari oo ku daa illaa 25 min kadibna kaga maydh biyo badan oo cad oo meel dhaxaad ah.
F.G: Isku wadda qas kadibna wajiga oo nadiifa ah saar ilaa 25 min kadib kaga maydh biyo cad.
Wajiga iskujira/ combination skin:
Sonkorta buniga ah/ brown sugar
Caano / fresh milk
Walaalshey qaaliga ah marwalbo wajigaada adiga ayaa iskaleh. Haddii aad ku ciyaarto waa dhibaato ee isku day inaad si wanaagsan oo Alle raali ka yahay isku qurxiyo. Waxaa wanaagsan marwalbo inaad la timaado Alle ka cabsi. Waxaana jira dhibaatooyin badan oo gabdhaha ka haysta wxyaabaha la isku qurxiyo, si aad ugu badbaado dhibaatooyinka ay caalamka ka wada simanyihiin raac qodobadaasi aan kuu sheegay.
Maxay kulla tahay?
Nasashada Isbuuca + ILA QOSOL Ninkii Naagtiisa Aay Amaani Jirtay Iyo Markuu U Abaal Guday Wuxuu Kala Kulmay…
Barnaamijkii KOBCI MASKAXDAADA Iyo Tallooyin Iyo Xikmado Ku Saabsan Nolosha